မနက်ဖြန်ကို ပိုလှစေမယ့် နည်းလမ်း ၇ သွယ် - Myanmar Spirit
Home / Aung Ko U - UMK / မနက်ဖြန်ကို ပိုလှစေမယ့် နည်းလမ်း ၇ သွယ်
9:21:00 pm Myanmar Spirit
ဒီနေ့မှာ ကံတွေ မကောင်းပေမယ့်၊ မနက်ဖြန်ကို ယူသွားစရာမလိုပါဘူး။ ဒီမှာ မနက်ဖြန်တိုင်းကို ပိုပြီးတော့ ကောင်းတဲ့နေ့တွေဖြစ်စေဖို့ နည်းလမ်း (၇) သွယ်ကို ဒီမှာ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
တစ်ချို့နေ့တွေဟာ ကံမကောင်းတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အမှန်တရားတစ်ခုပါပဲ ဘယ်လောက်ပဲ လုပ်လုပ်၊ ဘယ်လောက်ပဲ ပိုက်ဆံရှိရှိ၊ ဘယ်လောက်ပဲ အဆက်အသွယ်ကောင်းကောင်း အဲဒါမျိုးတော့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့ တစ်နေ့ကုန်သွားတဲ့အထိ ကံမကောင်းခြင်းတွေ အဆင်မပြေခြင်းတွေကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ ကုန်ဆုံးသွားတာမျိုးလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်။ အတိတ်ကို ပြန်ပြောင်းလို့ မရတော့ပါဘူး … ဒါပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေကို တော့ စီမံခန့်ခွဲဖို့ ကြိုးစားလို့ရပါတယ် … ဒါပေမယ့် မနေ့က အဆင်မပြေမှုတွေ၊ ကံမကောင်းမှုတွေဟာ မနက်ဖြန်အထိ ပါလာမယ်လို့ တင်နေရင်တော့ မှားယွင်းနေပါပြီ။
တကယ်လို့ ဒီနေ့ဟာ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် မနက်ဖြန်ကို ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ ကောင်းသောနေ့တွေ ဖြစ်လာမယ်လို့ ယုံကြည့်လိုက်ပါ။ ကဲပြောနေရင် ကြပါတယ် … အစမှာပြောခဲ့တဲ့ နည်းလမ်း (၇) ချက်က ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ စလိုက်ရအောင်ပါ …
၁။ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို သိပါစေ
တစ်နေ့ကို ၁၅ မိနစ်၊ မိနစ် - ၂၀ လောက်တော့ လုပ်ေ်နတဲ့ အလုပ်တွေကို ရပ်ပြီး ခဏ နားလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးထားတဲ့ အတွေး၊ အလုပ်တွေ၊ စိတ်ပျံ့လွင့်မှုတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဒီနေ့ကံမကောင်းဘူး၊ ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးကို မဝင်ပါစေနဲ့။ အဆင်မပြေတာတွေကို တွေးမယ့်အစား အဆင်ပြေတာတွေကို တွေးပါ … အဆင်ပြေမယ့် အရာတွေကို တွေးပါ။ တစ်ခုခု အဆင်ပြေတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသိအမှတ်ပြုပါ၊ မှားတဲ့အရာတွေကိုလည်း သုံးသပ်ပါ။ မနက်ဖြန်ကို ပိုကောင်းအောင် ဘာလုပ်မလဲ စဉ်းစားပါ … ။ ဒီနေ့လုပ်တဲ့အထဲက ကောင်းတဲ့အရာတွေကို ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲ ဆိုတာလည်း စဉ်းစားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းကိစ္စ အဝဝမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုပေး၊ ဒဏ်ပေး စနစ် ကို ကျင့်သုံးထားပါ … မနက်ဖြန်အတွက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ပျံ့လွင့်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ တရားထိုင်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပျံ့လွင့်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရုံသာမက ကိုယ့်အပေါ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ် … ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲကို မကောင်းတဲ့ အတွေးတွေ ဝင်လာတိုင်း သုံးသပ်ပြီးတော့ မောင်းထုတ်လိုက်ပါ ။ တရားထိုင်တဲ့ အလေ့အထ မရှိရင်တော့ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် နည်းနည်းတော့ အချိန်ပေးလေ့ကျင့်ရပါလိမ့်မယ် … ဒါပေမယ့် တရားထိုင်ခြင်းက ရတဲ့ စိတ်ပိုင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ ။ တရားထိုင်းခြင်းကြောင့် ပိုကောင်းတဲ့ အတွေးတွေ … ပိုပြီးတော့ ကြည်လင်တဲ့ စိတ်တွေ … ရလာမှာဖြစ်သလို အနည်းဆုံးတော့ မနက်ဖြန်အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ နည်းနည်းနဲ့ အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။
၃။ လေကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး အဟာရမျှတအောင် စားသုံးပါ
စိတ်ချမ်းသာတဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်စေဖို့ ကိုယ်ကျန်းမာနေဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အဟာရမျှတတဲ့ အစားအသောက်တွေ … အသားဓါတ်၊ ကစီဓါတ် နဲ့ အဆီဓါတ်တွေကို မျှတအောင် စားသုံးပါ … အသားဓါတ်ပါတဲ့ အသား/ငါးအမျိုး ပဲအမျိုးမျိုး၊ ကစီဓါတ်ပါတဲ့ ဆန်အပါအဝင် ပြောင်းဆန် အစရှိသဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ် အစားအစာတွေမှာ Balance Diet ဖြစ်အောင် စားသောက်ပါ။ အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုယ်လည်း နေ့စဉ် စားသုံးပါ။ ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ရွှင်လန်းတက်ကြွနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ မနက်ဖြန်တိုင်းကို လန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ စတင်နိုင်မှာပါ။ ညနေခင်းတိုင်းမှာ ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခု လုပ်တာဟာလည်း စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျစေရုံသာမက ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ကာယစွမ်းအားတွေ တိုးတက်စေပါတယ်။ ပြီးတော့ အိပ်လို့လည်းကောင်းတဲ့ အတွက် နောက်တစ်နေ့ မနက်ခင်းမှာ အိပ်ရေးဝဝနဲ့ လန်းလန်းဆန်းဆန်း နိုးထနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၄။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ပါ
ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတွေကို အဆင်ပြေစေဖို့ အလုပ်မှာ စိတ်နှစ်ထားပါ။ ဘာမှ လုပ်စရာထွေထွေထူးထူး မရှိဘူးဆိုရင်တောင် မနက်ဖြန်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို ဦးစားပေး သတ်မှတ်ထားပါ။ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာတွေ … လုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတာတွေ … လုပ်သင့်တယ် ထင်တာတွေ အားလုံးကို စာရင်းလုပ်ထားပါ။ အဲဒီလို စာရင်းလုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ဘာကို အရင်လုပ်ရမလဲ ပြီးမြောက်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဆိုတာကို ဆက်ပြီး သတ်မှတ်ပါ။ မမျှော်လင့်ဘဲ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အရေးပေါ်ကိစ္စတွေအတွက်တော့ အချိန်နည်းနည်း ချန်ထားပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်တွေက စိတ်ဖိစီးမှုကင်းဝေပြီး တော့ သက်သာရာ ရနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် … ။
အဲလိုမှမဟုတ်ရင် အချိန်တွေပေးပြီးလုပ်နေပေမယ့် လုပ်ရင်းနဲ့မြုတ်ပြီး စိတ်တွေညစ်လာ ပါလိမ့်မယ်။ အခုအချိန်ကစပြီး တစ်နေ့မှာ အနည်းဆုံး ၂-ချိန်လောက်တော့ အနားပေးပေးပါ။ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် အလုပ်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်တော့ အချိန်ပေးပါ။ မပြီးမပြတ်တာတွေ များလာရင်တော့ အဲဒါတွေက ကိုယ့်ကို စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပေးလာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဘာမှ အပူအပင်မရှိဘဲ အေးအေးဆေးဆေးလေး နေရတာက တန်ဖိုးရှိပါတယ် … ။
၆။ အိပ်ရာ စောစောထပါ
မနက်ဖြန်ကို စောစောစီးစီး နိုးထနိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်သလို နာရီကို နှိုးစက်ပေးထားပါ။ လိုအပ်တဲ့ အချိန်ထက် အနည်းဆုံး နာရီဝက်လောက် ကြိုထပါ … ဒါမှသာ ပြင်ဆင်ချိန်ရမှာ ဖြစ်သလို ကားပိတ်တာ စတဲ့ လေလွင့်ချိန်တွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ် … ဒါ့အပြင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် ကောင်းလေးလည်း ဘဝအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ် … ။ တကယ်လို့ ၁ နာရီလောက်တာ စောထနိုင်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ် …. တရားထိုင်တာ … လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ … ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တဲ့ မနက်စာကိုပါ အချိန်ရရင် ကိုယ်တိုင် လုပ်စားနိုင်ပါတယ်။ စောစောထဖို့ လေ့ကျင့်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကင်းဝေးပြီး မနက်ခင်းရဲ့ ကြည်နှုးမှုကို ခံစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၇။ သာယာတဲ့နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်စေဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပါ
ဒါကလည်း တော်တော်လေး အရေးကြီးပါတယ် … ။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ အချက်တွေအပေါ်မှာ ဘယ်လောက် လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် … ဘယ်လောက်အတွေ့အကြုံရှိတယ် ဆိုတဲ့ အချကတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပိုခိုင်မာ စေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က စိတ်တိုတတ်တယ် … စိတ်ဆိုးတတ်တယ် …. ဆိုရင် သာယာတဲ့နေတွေဖြစ်ဖို့ စိတ်ကို ပိုထိန်းရပါတယ် … ကားပိတ်တယ်ဆိုတာလည်း သဘာဝလို ဖြစ်နေပါပြီ … အဲဒီအပေါ်မှာ စိတ်အပင်ပန်းခံမယ့်အစား အကျိုးရှိတာ တစ်ခုခု တွေးလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးကို နားကြပ်လေးနဲ့ နားထောင်နေတာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ … ဒါမှသာ ကိုယ့်စိတ်က နည်းနည်း သက်သာရာ ရပါလိမ့်မယ် … ။ မနက်ဖြန်တိုင်းမှာ စိတ်ချမ်းသာအောင်နေမယ် လို့ ခုချိန်ကစပြီး စိတ်ပိုင်း ဖြတ်လိုက်ပါ … ။
တိကျတဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ သဘောထား မှန်မှန်ကန်ကန် နေတတ်ရင် မနက်ဖြန်တိုင်းဟာ လှပါနေပါလိမ့်မယ် …